Ukubalwa Kwamagama Nomphumela Wobude Bokuqukethwe ku-SEO | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Novemba 20, 2020 NgoLwesine, Februwari 25, 2021 Douglas Karr
Isikhathi eside impela, bengizama ukubonisana nabaqalayo abaxhaswa ngezimali namakhasimende amakhulu ebhizinisi ngoba bengazi ukuthi ngizokwazi ukuhambisa inaliti yokuguqula kakhulu nezinkampani ezinemithombo nesikhathi sokuthwebula isabelo semakethe. Ngonyaka odlule, ngokokuqala ngqá, nginqume ukusebenzisa amasu afanayo ebengiwasebenzisela lezo zinkampani ezinezinkampani zesifunda, ezincane… futhi kube nomthelela omkhulu ekuthuthukiseni amazinga okucinga nokuguqulwa kwawo.
Umnyombo wecebo ukulahla ifayela le- ulayini wokukhiqiza okuqukethwe futhi, esikhundleni salokho, ngakha i- umtapo wokuqukethwe. Ukugxila kwethu akukhona kubude besikhathi noma imvamisa yama-athikili ethu esiwakhiqizela iklayenti, kungukucwaninga izihloko abanentshisekelo kuzo futhi ezihambisana nebhizinisi… nokwakha igunya labo lomuntu siqu nelomabhizinisi nokwethembana namakhasimende angaba khona. Isikhungo sokugxila sisusa inkampani futhi, esikhundleni salokho, sibeka umthengi noma ithemba lebhizinisi enkabeni yokuqukethwe.
Isibonelo, nginabangani abahle abanamandla amakhulu futhi angabizi ipulatifomu yokumaketha ingcebo. Ngezici ezinjengohambo lweselula, ukuthumela imiyalezo, i-CRM, izincwadi zezindaba ze-imeyili, kanye nokuzenzakalela kokumaketha… bangabhala ngalezo zici nezinzuzo usuku ngalunye. Lokho kungabeka uhlelo lwabo emgodini wecebo labo lokuqukethwe.
Kepha bekungeke kuqhube isikhundla noma ukuguqulwa.
Kungani? Ngoba izivakashi zingabona isayithi labo, zifunde ngezici zazo, bese zibhalisela i-akhawunti yesilingo samahhala. Amakhulu amathiphu nezindatshana zama-athikili angathola amasheya athile, kepha ngeke aguqulwe.
Ukugxila Komsebenzisi kuqhathaniswa ne-Algorithm Focus
Kunalokho, I-Agent Sauce isebenza ngencwadi yezindaba, ibhulogi, ne-podcast egxile ezinseleleni nasezinzuzo zokuba yimpumelelo i-agent ye-real estate. Bake baba nezingxoxo ngezinkinga zezomthetho, ukubolekwa kwemali nge-VA, ukufuduswa kwebhizinisi, izintela zombuso nezombusazwe, ezomnotho zesifunda, isiteji sasekhaya, ukuphenywa kwendlu, njll. Ukugxila kokuqukethwe kwabo akukuhlinzeki ngamathiphu avamile atholakala kwenye indawo; ukuhlinzeka ngobuchwepheshe obuvela kuzinsizakusebenza zemboni ezizosiza amathemba abo namakhasimende athengise ngempumelelo futhi akhule ibhizinisi labo.
Kepha akulula. Okokuqala, kufanele bacwaninge ukuthi lusuku luni empilweni yomenzeli nazo zonke izingqinamba abaphonselwa inselelo ngazo. Ngemuva kwalokho, kufanele bakhe ubuchwepheshe babo noma bethule abanye ochwepheshe ukusiza amathemba abo namakhasimende abo. Futhi kufanele bakwenze konke lokho ngenkathi beqhubeka nokuncintisana nepulatifomu yabo.
Kodwa-ke, umthelela wukuthi baba ngumthombo omkhulu wemboni futhi bakha ubudlelwano besikhathi eside nezithameli. Ngokuthola amathemba, baba insizakusebenza abagcina phezulu engqondweni yabo ngokuqukethwe kwekhwalithi yabo. Kumakhasimende, ayabasiza baphumelele futhi bajabule ngemisebenzi yabo.
Ubude bokuqukethwe buqhathaniswa nekhwalithi yokuqukethwe
Buza ababhali abaningi ngesilinganiso sokucwaninga nokubhala i-athikili, futhi impendulo ijwayelekile:
Lithini igama elibalwa nesikhathi esinqunyiwe?
Leyo mpendulo iyangibulala. Nakhu okufanele ube ngumbuzo:
Obani abalaleli futhi yini inhloso?
Ngaleso sikhathi, umbhali angenza ucwaningo lokuqala kumncintiswano, izinsizakusebenza, kanye nesimo sezethameli ezihlosiwe abuye nesilinganiso sokuqedwa kwe-athikili nezindleko. Anginandaba nobude bokuqukethwe; Ngiyakukhathalela ukuphelela kokuqukethwe. Uma ngishicilela i-athikili ekhuluma ngesihloko, ngifuna ukuphendula yonke imibuzo ehambisana nalokhu okuqukethwe. Ngifuna ukuhlinzeka ngamaqiniso nezibalo. Ngifuna ukufaka imidwebo, amashadi, izithombe, nevidiyo. Ngifuna ukuthi i-athikili ibe yindatshana enhle kunazo zonke kwi-Intanethi.
Futhi lapho sishicilela i-athikili ephelele, ecwaningwe kahle, engcono kunanoma yimuphi omunye umthombo, ubude bokuqukethwe kwaleyo ndatshana buye buba bude, kunjalo. Ngamanye amazwi:
Ngenkathi ubude bokuqukethwe buhambisana nezinga lenjini yokusesha nokuguqulwa, akunjalo imbangela amazinga angcono nokuguqulwa. Ukwenza ngcono ikhwalithi yokuqukethwe kubangela amazinga aphezulu nokuguqulwa. Futhi okuqukethwe kwekhwalithi kuhambisana nobude bokuqukethwe.
Ngalokhu engqondweni, ake sibheke ukuhlobana (hhayi okuyimbangela) kobude bokuqukethwe, ukwenziwa kahle kwezinjini zokusesha, nokuguqulwa kule infographic enemininingwane evela kuCapsicum Mediaworks, Ubude Bokuqukethwe Buthinta Kanjani I-SEO Nokuguqulwa. Okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu okwenzeka ukuthi kube ne- ukubalwa kwamagama aphezulu Izinga elingcono, labiwa ngokwengeziwe, lifaka isikhathi eside, lijula ​​kakhulu, lenyusa ukuguqulwa, lihola izinkomba, futhi lehlise amazinga e-bounce.
Isiphetho sibucayi; ikhwalithi okuqukethwe okuyifomu ende kungukutshalwa kwemali okungcono.
Tags: infographic yokuqukethweubude bokuqukethweikhwalithi yokuqukethweusezingeni lokuqukethweucwaningo lokuqukethweisibalo samagama wokuqukethweukuguqulwaIsikhathi eside kangakananiamagama amangakikanjani ukukala kangconoinfographicokuqukethwe ifomu elideizingausezingeniucwaningoseoukuphelelaigama lokubala
Okungahle kwenzeke: Yondla Imikhiqizo Yakho Kumanani Wokuqhathanisa Amanani, Izihlanganisi, Izindawo Zezimakethe, kanye Namanethiwekhi Esikhangiso